FIOMPIANA OMBY : Omby maherin’ny arivo no efa tonga any Toamasina II amin’izao
Anisan’ny mampalaza ary mampiavaka an’i Madagasikara amin’ireo firenena maro any ivelany ny firoboroboan’ny fiompiana omby sy ny fananana kazarana omby samihafa. 11 septembre 2017
Rehefa miresaka an’io sehatra io anefa eto amintsika dia ny any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy foana no alehan’ny saina voalohany. Araka izany dia efa mandeha ankehitriny ny tetikasa fanitarana ity sehatry ny fiompiana omby ity any amin’ny faritra hafa. Sambany araka izany no nisy toeram-piompiana omby goavana miorina ao Toamasina, na ao anatin’ny faritra Atsinanana iray manontolo mihitsy aza no resahana.
Omby maherin’ny arivo amin’izao no efa tonga sy ompiana ao Antetezambaro, distrikan’i Toamasina faharoa. Araka ny fanazavana dia omby avy any Ankaramena Fianarantsoa izy ireo no notanterina tsikelikely ao amin’io toeram-piompiana lehibe ao Antetezambaro io. Azo ambara ho tena malalaka tokoa ny toerana iompiana azy ireo satria dia miorina amin’ny faritra mirefy roa hektara.
Ny tanjona amin’izao hetsika izao, hoy ny tompon’andraikitry ny tetikasa, dia ny hanatsarana sy hamerenana indray ny kalitaon’ny omby malagasy sy ny lazan’ny tsiron’ny hen’omby eto Madagasikara. Ka anisan’ny kolokoloina any an-toerana ny karazana omby malagasy izay voalaza fa efa atahorana ho lany tamingana. Araka izany, vao tonga any an-toerana mihitsy ireo biby dia efa manomboka ny fanaraha-maso ara-teknika sy ara-pahasalamana atao amin’ireo omby, toy ny vaksiny sy ny fikarakarana ara-pahasalamana rehetra mba hisorohana ny aretina.
Nisy omby maromaro maty
Efa nisy ny lamina maty paika napetraka eo amin’ireo sokajin’olona misehatra amin’ny fiompiana ireo biby ireo. Fantatra àry fa dokotera mpitsabo biby na veterinera miisa efatra no misahana ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny omby, miampy ireo teknisianina momba ny fiompiana miisa folo, ary eo ihany koa ny teratany indoneziana iray izay teknisianina momban ny fikarohana sakafom-biby.
Araka ny fantatra dia mpiasa am-polony maro no miasa sy miara-misalahy amin’ny fampandehanana ity toeram- piompiana omby lehibe ity. Araka ny fanazavana dia nisy maromaro tamin’ireo omby no maty tamin’ny fotoana voalohany nahatongavan’izy ireo tany an-toerana. Tranga izay noho ny harerahana sy ny tsy fahampian-tsakafo tamin’ny fotoana izay nitondrana ny omby avy any Ankaramena nankany an-toerana fa tsy vokatry ny valan’aretina na antony hafa akory, araka ny fanazavan’ny foibem-paritry ny fambolena sy ny fiompiana, tamin’ny alalan’ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny fahasalaman’ny biby.
Tsara marihana fa tsy nivoaka ny toerana ny henan’ireo omby maty ireo fa efa nisy ny fepetra noraisina nandorana izany. Araka ny fanazavana hatrany dia omby hatrany amin’ny dimy arivo no kasaina hampidirina ao amin’io toeram-piompiana io. Azo heverina araka izany fa hanatsara bebe kokoa indray ny sehatry ny fiompiana omby sy ny seha-pihariana omby amin’ny ankapobeny eto Madagasikara izany.